के भयो शिशिर भण्डारी लाई यस्ताे ? सबैलाई सहयोग गर्ने शिशिर आज आफै हात जोड्दै सबैसँग सहयोग माग्दै (भिडियो हेर्नुहाेस्) – Onlines Time
January 4, 2021 onlinestimeLeaveaComment on के भयो शिशिर भण्डारी लाई यस्ताे ? सबैलाई सहयोग गर्ने शिशिर आज आफै हात जोड्दै सबैसँग सहयोग माग्दै (भिडियो हेर्नुहाेस्)
शिशिर भण्डारीलाई के भयो ? सबैसँग हात जोड्दै सहयोग माग्दै आए Shishir Bhandari
राजनीतिबारे चर्चा गर्दा एकपटक नेपालको इतिहासको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। अमरसिंह थापाले अंग्रेजसँगको युद्धमा नेपाल तर्फबाट कमान्ड सम्हालेका थिए। नेपाल राष्ट्रको एकीकरणमा पृथ्वीनारायण शाहलाई ठूलो सहयोग गरे। अंग्रेजसँगको युद्धमा पराजित हुनुपूर्व अंग्रेज सेनापतिले तराईको ठूलो भूभाग अमरसिंहलाई व्यक्तिगत हिसाबले दिई युद्धबाट पछि हट्न दिएको प्रलोभनलाई अस्वीकार गरी अन्तिम अवस्थासम्म बहादुरीका साथ युद्धमोर्चा सम्हाले तापनि पराजित भएकाले गिरेको मनोबल लिएर गोसाइँकुण्ड गई आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्न पुगे।
भीमसेन थापाले टिस्टादेखि सतलज नदीसम्म आफ्नो क्षेत्र विस्तार गर्न अद्वितीय भूमिका निर्वाह गरे। यी मोर्चा सम्हाल्दा नेपाली सेना र शासकहरूको मनोबल उच्च थियो। उच्च मनोबलकै कारण भाला र भरुवा बन्दुकको सहारामा नेपाली सेनाले ठूलो संख्यामा आएको अंग्रेजहरूको सेनालाई सिन्धुलीगढीको युद्धमा पराजित गर्न सफल भएका हुन्। यी सबै घटनामा व्यक्तिगत स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिएर राष्ट्रका लागि समर्पित हुँदा सफलता हात लाग्न सकेको हो। यस अर्थमा अमरसिंह थापा र भीमसेन थापाको नाम नेपालको इतिहासमा स्वर्णाक्षरले लेखिएको छ।
राणाहरूले राजाको अधिकार बलपूर्वक छिनेर इस्ट–इन्डिया कम्पनीलाई आफ्नो पक्षमा राखी लामो समयसम्म एकतन्त्रीय शासन गरे। भारत स्वतन्त्र भएपछि कम्पनीको समर्थनमा निरन्तरता पाइराखेका राणाहरूको शासन डग्मगायो। गिरेको मनोबलका साथ शासन गरिराखेका राणाहरूको सम्बन्ध नेपाली जनता, स्वतन्त्र भारत र नेपालका राजा सबैसँग राम्ररी अघि बढ्न नसक्दा शासनबाट च्युत हुनुपर्‍यो। २०१५ सालमा प्रथम जननिर्वाचित सरकार अल्पअवधिमा राजा महेन्द्रको कोपभाजनमा परी प्रजातन्त्रप्रेमीहरूले अत्यन्त दुःखकष्ट र यातना सहनुपर्दा पनि जनताको माया पाइरहँदा उनीहरूको मनोबल सदैव उच्च रहन पुग्यो। यही कारणले जनताले २०४६ सालको जनआन्दोलनमा यस दलको नेतृत्वलाई उत्साहका साथ समर्थन गरे। देशमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भयो।
प्रजातन्त्रको पुनः प्राप्तिपश्चात् नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्व र एजेन्डामा आन्दोलन सफल भएकाले २०४८ सालको निर्वाचनमा यस दलका कार्यकर्ता र नेताहरूको मनोबल उच्च रहन पुगेको थियो। कांग्रेस मुख्य दल र अन्य सहायक दलका रूपमा जनतामा प्रभाव पार्न सफल भएकाले उक्त निर्वाचनमा यस दलले आरामदायी बहुमत प्राप्त गर्न सफल भयो। यही निर्वाचनमा दलभित्र अन्तरघातको राजनीतिले प्रश्रय पायो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री किसुनजी पराजित बन्नुपर्ने अवस्था कांग्रेसभित्रबाट सृजना गरियो। दलभित्र व्यापक असन्तुष्टिको अवस्था मात्र सृजना भएन; समूह–समूहमा नेताहरू मोर्चाबन्दी गर्दै व्यक्तिवादी राजनीतिमा अव्यस्त हुँदै गए। ३६ र ७४ समूह खडा भयो।
गुटबन्दीकै परिणामस्वरूप कांग्रेस विभाजित बन्न पुग्यो। २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा गुटबन्दी र व्यक्तिगत महŒवाकांक्षामा आधारमा दल स्खलित भएको अवस्थामा मतदाताको मनोबल उच्च हुन सकेन र कांग्रेस दोस्रो दलका रूपमा स्थापित हुन पुगी देशमा पहिलोपटक वामपन्थी नेतृत्वको अल्पमतको सरकार गठन हुन पुग्यो। अल्पमतको सरकारलाई हटाउन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भई पञ्चायतविरोधी शक्तिहरू कांग्रेस र एमाले दुवै दलहरू पूर्व महापञ्चलाई आआफ्नो नेता मानी उसैको नेतृत्वमा सरकारमा जान प्रतिस्पर्धामा उत्रिए।
मोटरसाइकल झरेपछि गंगाधरले भरतलाई दायाँ कानबाट गो’ली हानेर ह’त्या गरेर कुलोमा फा’ले !